VAOVAON’NY “COLLECTIF-GTT” - rov@higa
7 Juin 2011, 22:42pm
Namaly ny soso-kevitra avy amin'ny SADC ny Ankolafy RAVALOMANANA
Natolotra ny hery politika rehetra any Gaborone omaly ny soso-kevitra avy amin'ny SADC momba ny famahana ny krizy eto Madagasikara. Soso-kevitra nivoaka tamin'ny fivoriam-be tamin'ny 20 May lasa teo. Isan'ny nahazo izany ny ankolafy RAVALOMANANA ary namaly izany avy hatrany. Misy ny hevitra voarakitra ao anatiny izay neken'ny ankolafy tarihin'nyFiloha RAVALOMANANA avy hatrany saingy nisy kosa ny nitondrany fanamarihana. Isan'izany ny fametrahana an'i TGV ho filohan'ny tetezamita indray sy ny momba ny tondro-zotra nataon'i Simao. Nanterina ihany koa ny tokony hitadiavana ny fomba hiverenan'ny Filoha RAVALOMANANA haingana sy ny ametrahana tontolo politika tony eto Madagasikara amin'ny alalan'ny famoahana ny gadra politika sy ny fampitsaharana ny fanenjehana rehetra.
Tsy nanao sonia fa miandry ny fivorian’ny SADC any Sandton
Nifarana io hariva io ny fivoriana tany Gaborone Borswana nandinihana mikasika ny raharaha momba ny krizy eto Madagasikara. Namoaka fanambarana mikasika izany ny SADC ary nanamarika fa hanao tatitra mikasika ny fihaonana tao Gaborone amin’ireo Filoham-pirenena mpikambana ao amin’ny SADC izay hihaona any Sandton Afrika Atsimo amin’ny 11 Jiona hoavy izao.
Raha ny voarakitra ao amin’ny fanambarana kosa dia mamintina ny asa rehetra nataon’ireo hery politika tonga tany Gaborone teo ambany fiahian’ny SADC. Isan’izany ny fandinihana ny soso-kevitra nomen’ny vondrona SADC tamin’ny 20 May lasa teo sy ny fandinihana mikasika ny sori-dalana ahafahana mamaha haingana ny krizy Malagasy. Ny faihaonan’ireo mpitarika avy amin’ny SADC sy ny hery politika kosa dia nahafantarana fa samy mankato ny fifampiresahan’ny samy Malagasy avokoa ny mpanao politika Malagasy ary efa manaiky fa ny fifidianana madio sy azo antoka ihany no tena fanalahidy amin’izao olana izao.
Tsy nisy arak’izany ny fanaovan-tsonia antotan-taratasy na iray aza fa fihaonana tsirairay tamin’ny mpikarakara no nanakatonana ny fihaonana tany Gaborone androany nialoha ny lanonam-pamaranana tsotsotra.